Waa maxay ka Linux?
Laga soo bilaabo Linux (aka <° Linux) waa goob u heellan mowduucyada la xiriira kombiyuutarka y tikniyoolajiyadaha bilaashka ah. Hadafkeenu maahan mid kale oo aan aheyn inaan siino dhamaan isticmaaleyaasha hadda bilaabaya adduunka GNU / Linux, Meel aad ku baran karto aqoon cusub sida ugu fudud uguna macquulsan ee ugu macquulsan.
Iyada oo qayb ka ah ballanqaadkeena ku saabsan adduunka Linux iyo Software Bilaash ah, DesdeLinux waxaan la wadaagnay Freewith 2018 mid ka mid ah Dhacdooyinka ugu muhiimsan ee qaybta Spain.
Kooxda tafaftirka ee 'Linux' waxay ka kooban tahay koox ka mid ah khubaro ku takhasustay GNU / Linux, qalabka, amniga kombiyuutarka iyo maamulka shabakadda. Haddii aad sidoo kale rabto inaad ka mid noqoto kooxda, waad awoodaa noo soo dir foomkan si aad u noqoto tafatire.
Celcelis ahaan isticmaale Linux ah oo leh dareen ku saabsan teknoolojiyada cusub, gamer iyo Linux wadnaha. Waxaan ka bartay, isticmaalay, la wadaagay, ku riyaaqay oo aan ku dhibtooday tan iyo 2009kii Linux, dhibaatooyinka ku tiirsanaanta, argagaxa kernel, shaashadaha madow iyo ilmada ku jirta isku soo ururinta kernel, dhammaantood ujeeddooyinka barashada? Tan iyo markaas waan shaqeeyey, tijaabiyey waxaanan kugula taliyay tiro badan oo ah qaybinta kuwaas oo aan ugu jeclahay ay tahay Arch Linux oo ay ku xigto Fedora iyo openSUSE. Shaki la'aan Linux waxay saameyn weyn ku yeelatay go'aamada la xiriira waxbarashadayda iyo noloshayda shaqada maadaama ay ahayd Linux oo i xiisaysa hadana waxaan u socdaa adduunka barnaamijyada.
Linux Post Ku Rakib
Laga soo bilaabo yaraantaydii waxaan jeclaa teknolojiyadda, gaar ahaan waxa si toos ah looga sameeyo kombiyuutarada iyo Nidaamyadooda Hawlgalka. In ka badan 15 sano ayaan jacayl waali ah u qabay GNU / Linux, iyo wax kasta oo ku lug leh Software Free and Open Source. Intaas iyo in ka badanba, maanta, anigoo ah Injineer Kumbuyuutar iyo xirfadle leh shahaado caalami ah oo ku saabsan Nidaamka Howlgalka ee Linux, waxaan ku qori jiray qiiro iyo dhowr sano hadda, degelkan caanka ah ee caanka ah ee DesdeLinux. Taas oo ah, inaan maalin walba idinla wadaago, inbadan oo aan ka barto maqaallo wax ku ool ah oo waxtar leh.
Jacaylka aan u qabo dhismaha kombuyuutarka ayaa igu horseeday in aan baaro lakabka isla markiiba ka sarreeya oo aan lakala sooci karin: nidaamka qalliinka. Iyada oo leh dareen gaar ah nooca Unix iyo Linux. Taasi waa sababta aan dhowr sano ugu qaatay barashada GNU / Linux, helitaanka khibrad u shaqeynta sida khad caawimaad iyo talo siinta tikniyoolajiyadaha bilaashka ah ee shirkadaha, iskaashiga mashaariicda kala duwan ee softiweer ee bilaashka ah ee bulshada, iyo sidoo kale qoritaanka kumanaan maqaalo oo loogu talagalay noocyo kala duwan warbaahinta dhijitaalka ah ee ku takhasustay Source Open. Had iyo jeer adoo hal ujeedo ka leh: Inaadan joojin waxbarashada.
Jacaylka Barnaamijka Bilaashka ah iyo adduunka barnaamijka. Waxaan ka bilaabay adduunka Linux iyada oo ay ugu wacan tahay qaybinta Mandrake 7 oo ku dhowaad 20 sano ka dib weli waxaan ku jiraa adduunkan markasta oo aan isku dayo inaan sameeyo xoogaa yar. Tan iyo markaas, kama aanan helin kaliya shahaado kahor isticmaalka Software Free laakiin waxaan ku sameeyay maqaallo iyo casharo badan.
Alexander (aka KZKG ^ Gaara)
Waxaan safarkayga ka bilaabay Linux wixii ka dambeeyay 2007, sannadihii aan soo maray qaybinno aan dhammaad lahayn, waxaan arkay daraasiin iyaga ka mid ah oo ku dhashay iyo qaar kale oo badan oo dhinta, haddii ay ku saabsan tahay dookhyada shaqsiyeed waxaan dooran lahaa ArchLinux iyo Debian wax kale. Waxaan si xirfad leh u shaqeynayey sanado badan aniga oo maamule ka ah shabakadaha iyo nidaamyada UNIX, iyo sidoo kale horumariye websaydh ah oo xalal habaysan u ah macmiilka.
Waxaan jecelahay inaan naftayda dhex galo adduunka Linux, oo ku takhasusay isticmaalka waxyaabaha loo yaqaan 'distros', gaar ahaan kuwa loogu talagalay ganacsiyada. Xorriyadda Xeerku waxay si toos ah ugu dhigantaa Kobaca Urur. Taasi waa sababta Linux ay u tahay nidaam aan ka maqnaan karin maalinteyda maalin.
Barnaamij sameeye ku raaxeysta Linux iyo qeybinta, aad ayeyna u noqotay wax aasaasi u ah maalinteyda ilaa maanta. Mar kasta oo ay soo baxdo qalab cusub oo ku saleysan Linux, ma sugi karo waqti dheer si aan u tijaabiyo, oo aan si fiican u barto.